Maitiro ekubvisa mifananidzo kubva kumateki dhoko kana isu tavhura mashandiro | Ndinobva mac
Apple yagara ichifunga nezve dhizaini kwete chete yemashandisirwo ayo asiwo zvigadzirwa zvawo, ndipo panogadzira chingwa chake Jony Ive, kunyangwe nguva nenguva zvichiita sekunge kurudziro yakachengetedzwa uye haazive kwaakasiya (bhatiri kesi yeiyo iPhone pasina kuenda kumberi).
Nguva dzese patinovhura application, nekumisikidza macOS inotiratidza kadikidiki kekushandisa kunovhura. Sezvo isu tinodzvanya pane zvimwe zvezvidhori padoko redu kana kuenda kune yekuvhura, apo application painovhura, iyo icon inorova mashoma "hops" kutizivisa kuti iri munzira yekuvhura. Kana iwe wakaneta neiyi mifananidzo, muchinyorwa chino tinokuratidza maitiro ekuzvimisa.
Kana iwe ukashandisa Mac ane makore mashoma, iwe ungangodaro wakaneta zvishoma neiyi animation, sezvo kuvhura mamwe mafomu kunotora nguva yakareba kupfuura zvakajairwa uye iyo icon yekushandisa ine nguva yakanaka kusvetuka kusvikira yazopedzisira yavhura. Kana iwe uri mumwe wevashandisi vane iyo doc yakavanzwa, kuremadza iyi animation hakune musoro mune dzidzisosezvo iwe usingaione kana iwe ukavhura iyo app. Kuti usabvisa mifananidzo yeapplication paunenge uchiavhura, tinofanirwa kuenderera seinotevera:
Dzinga dock icon mifananidzo paunenge uchivhura maapplication
Chekutanga pane zvese isu tinoenda kuApple apple, iri kumusoro kwekona kona uye tinya paSystem Preferences.
Mukati mezvinodiwa zvehurongwa tinoenda kuDock, chiratidzo chechitatu chiri mumutsara wekutanga wesarudzo.
Mune menyu ichaonekwa, tinoenda kubhokisi Mhuka yekushandisa kuvhura uye isu tinoimisa.
Ipapo isu tinongofanirwa kuyedza pane chero application kuti titarise kuti iyo icon icon inomira kusvetuka kwemasekonzi mashoma isati yavhura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekubvisa iwo maficha emadhodhi dhodhi kana isu tavhura kunyorera
Gumi nembiri yeSouth iCurve yadzoka, Mac inomira ine rakakombama base
Intel Inotangisa Inotevera Generation Ice Lake Ma processor e2018